Madaxweynaha Somaliland oo Gudoomiyayaasha Golaayaasha iyo Xisbiyadda Qaranka Kulan Kula Yeeshay Qasriga Madaxtooyadda – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Madaxweynaha Jamhuuriyada Somaliland Md. Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta kulan gaarka la yeeshay gudoomiyayaasha Golayaasha iyo Xisbiyadda Qaranka Somaliland waxaanu kala hadlay in talo-qaran laga yeesho doorashooyinka soo socda ee dalka ka qabsoomi doono.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ugu horayn seegay ujeedda kulan ayaa yidhi, “Ugu horreyn, waxaan jecelahay inaan idiinka mahad-naqo sida aad u soo ajiibteen kulankii aan idiinku yeedhay. Sharaf weyn bay ii tahay in aan maanta idinku soo marti-qaado kulankan muhiimada weyn leh ee dulucdiisu tahay in aynu ka wada-hadalno arrimaha doorashooyinka iyo diiwaangelinta ka bilaabmi doonta Gobollada Sanaag iyo Sool.
Mudanayaal, sida aad la socotaan waxa inoo qorshaysan inaynu qabano ama meel-marino 27-ka March, 2017-ka doorashooyinkii Madaxtooyada iyo Golaha Wakiillada. Sidaa darteed, si aynu u xaqiijino himiladaa qaran waxay inooga baahan tahay talo adag, tabaabulshe iyo tawfiiq. Madaxweyne ahaan waxa iga go’an in aan suurta-galiyo doorashooyinkaa xiligii loogu talo-galay, Eebbe idamkii. Hase-yeeshee, waxa inala deris ah xaqiiqdii caqabado ku gedaaman doorashada wakiillada, taas oo salka ku haysa qaybinta kuraasta aqalka cusub.”
Madaxweynaha ayaa intaasi ku darya, “Mudanayaal, Haddaba, waxaan idiinku yeedhay in laga yeesho talo midaysan, gaar ahaanna aad wada tashi mug leh ka yeelataan saddexdiina xisbi qaran iyo shir-guddoonka wakiiladu, si xal loogu helo qaybinta kuraasta baarlamaanka. Ugu dambayn, waxaan idinka rajaynayaa in aad gaadhaan go’aan midaysan oo xal u noqon kara qaybinta kuraasta Golaha Wakiillada, isla markaana wax-tar u ah dalka iyo dadka. Waxa kale oo aan idinka rajaynayaa in aynu si midaysan uga hawlgalno diiwaangelinta gobollada Sool Iyo Sanaag, oo qarankan ugu fadhida qiimo-weyn oo siyaasadeed”. Sidaasi waxaa yidhi Madaxweyne Siilaanyo.